ကက်သလစ်ရဟန်းဖြစ်တက်္ကသိုလ်ရှိရဟန်းလောင်းများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ကြရန် ဆရာတော်ဂျွန်စောယောဟန်က စာထုတ်ပြန်တော်မူ - Gloria News Journal
ရနျကနျ၊ မလေ ၁၄၊ ၂၀၁၉
ရနျကုနျကကျသလဈဂိုဏျးခြုပျသာသနာပိုငျ၊ လကျထောကျဆရာတောျကွီး ဂြှနျစောယောဟနျက မွနျမာနိုငျငံရှိကကျသလဈရဟနျးဖွဈတကျ်ကသိုလျ (ပွငျဦးလှငျ၊ တောငျကွီးနှငျ့ရနျကုနျမွို့သုံးခု) တှငျ ပညာသငျယူနေ ကွသော ရဟနျးလောငျးမြားအား ငှကွေေးထောကျပံ့ကွရနျ လှုံဆောျတိုကျတှနျးသော စာ (စာအမှတျ ဏမသအသ. သွ. ၀၀၃၂့ါည။ဏဃ။၁၉) ကို မလေ (၁၄) ရကျနေ့က တရားထုတျပွနျ တောျမူလိုကျသညျ။
၎င်းငျးစာထဲ၌ ဆရာတောျကွီးက ““ကိုရငျတဈပါး၏တဈနှဈစားစရိတျသညျ ကပြျသုံးသိနျး (၃၀၀၀၀၀) ထညျ့ဝငျကွရနျ၊ ကကျသလဈဆရာတောျကွီးမြားအဖှဲ့ခြုပျ၏အစညျးအဝေးတှငျ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါသညျဟု လညျးကောငျး၊ ကိုရငျမြား၏မိသားစုမြားနှငျ့ သကျဆိုငျရာသာသနာမြားမှ ကွိုးစားပါဝငျလှူဒါနျးပေးကွသညျ့ အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါသညျဟု လညျးကောငျး၊ ကနြျရှိသော ဘာသာဝငျသားသမီးမြားမှလညျး ပါဝငျလှုဒါနျးပေး ကွပါရနျ တိုကျတှနျးလိုပါသညျဟု လညျးကောငျး၊ ၎င်းငျးအလှုငှမြေားကို သကျဆိုငျရာ ကြောငျးထိုငျဘုနျးတောျကွီးနှငျ့ ဂိုဏျးခြုပျဆရာတောျကြောငျးတိုကျသာသနာ့ဘဏ်ဍာရေးမှူးရုံးခနျးတှငျလညျးကောငျး ထညျ့ဝငျလှူဒါနျး နိုငျပါသညျဟုလညျးကောျငး”” ရေးသား ဖောျပွထားပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံရှိကကျသလဈရဟနျးဖွဈတကျ်ကသိုလျ (ပွငျဦးလှငျ၊ တောငျကွီးနှငျ့ရနျကုနျမွို့နှဈခု) တှငျ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈအတှကျ ရနျကုနျကကျသလဈဂိုဏျးခြုပျသာသနာမှ ပညာသငျယူမညျ့ စုစုပေါငျးကိုရငျမြားမှာ (၂၀) ပါး ရှိသညျ။ ၎င်းငျးကိုရငျအပါး (၂၀) အတှကျ တဈနှဈလြှငျ သိနျး (၆၀) လိုအပျမညျဟု သိရှိထားရသညျ။
ထို့ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးရှိ ကကျသလဈရဟနျးဖွဈတကျ်ကသိုလျတှငျလညျးကောငျး၊ ကကျသလဈ သာသနာတောျအတှကျ လိုအပျသော အစီအစဉျမြားကို အကောငျအထညျဖောျနိုငျရနျအတှကျ အခွခေံလိုအပျ ခကြျမှာ ငှကွေေးမဟုတျဘဲ စနဈဖွဈလသေညျ။
ရနျကုနျကကျသလဈဂိုဏျးခြုပျသာသနာတှငျ (ရနျကုနျကကျသလဈဂိုဏျးခြုပျသာသနာ၏၂၀၁၉ ခုနှဈ လမျးညှှနျစာအုပျ) အရ၊ ကကျသလဈခရဈယာနျ ဘာသာဝငျဦးရေ (၈၀၀၀၀) ရှိသညျ။ ၎င်းငျးဦးရကေိုအခွခေံလကြျ၊ ဘာသာဝငျတဈဦးက တဈနှဈလြှငျ (ကပြျတဈထောငျ) သာ ထညျ့ဝငျလြှငျပငျ ကပြျသိနျးရှဈရာ (၈၀၀၀၀၀၀) ကောကျခံရရှိနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ကကျသလဈခရဈယာနျဘာသာဝငျဦးရမှော ခနျ့မှနျးခွေ (၈) သိနျး ရှိလြှငျ ဘာသာဝငျတဈဦးစီက တဈနှဈလြှငျ ကပြျတဈထောငျထညျ့ဝငျသော စနဈကို မွနျမာနိုငျငံကကျသလဈ ဆရာတောျကွီးမြားအဖှဲ့ခြုပျက စီစဉျလုပျဆောငျပေးသငျ့ပါသညျ။ ထိုသို့လုပျဆောငျလြှငျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ကကျသလဈခရဈယာနျဘာသာဝငျ မြားထံမှ တဈနှဈလြှငျ ကပြျသိနျး (ရှဈ) ထောငျကို ရရှိမညျ ဖွဈသညျ။ ဤငှကေို မွနျမာနိုငျငံကကျသလဈဆရာတောျ ကွီးမြားအဖှဲ့ခြုပျက သာသနာတောျနှငျ့လူမှုရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ လိုအပျ သောနရောနှငျ့အစီအစဉျမြားတှငျ အကြိုးရှိစှာ အသုံးပွုနိုငျမညျဖွဈသညျ။
Previous: မလေးရှားနိုင်ငံရောက်၊ ချင်း (လိုင်လူမျိုး) ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များထံ မြန်မာနိုင်ငံမှသာသနာပြုခြင်း (၁၀) နှစ်ပြည့်ဂျူဗလီကျင်းပခြင်း
Next: ဥရောပခရစ်ယာန်နိုင်ငံများ၌ ရွှေ့ပြောင်းမူစလင်များအား ကန့်သတ်ခြင်းသည် အမျိုးသားရေးစိတ်ကြောင့် ဖြစ်ဟု ကာဒီနယ်ဘတ်က မှတ်ချက်ပြုတော်မူ